နှစ်လိုဖွယ်မရှိသော်လည်းချစ်လိုဖွယ်ကောင်း၏! | Despised But Lovely! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက်၊လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, July 8, 2012
“ဤသူသည် ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူသတည်း” (ရှောလမုန်၅း၁၆)။
ရှောလမုန်သီချင်းထဲက၊ တရားဒေသနာတော်ဟောပြောဖူးမည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပေ။ ဤသည်မှားယွင်းမှုဖြစ်ပါသည်၊ စပါဂျန်၏ တရားဒေသနာတော် ခေါင်းစဉ်များ ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ ဆရာကြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ ရှောလမုန်သီချင်းထဲက ဟောကြားခဲ့ သော ဒေသနာခေါင်းစဉ်၆၃ခုကို တွေ့ရပါသည်။ ယနေ့ ထိုဆရာကြီး၏ ဒေသနာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောကြားပါမည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကတည်းက မတော်တဆ၊ ၎င်းဒေသ နာခေါင်းစဉ်ကို တွေ့လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တွေ့တွေ့ချင်း ကျွန်ုပ်စိတ် နှလုံးသားထဲ ထိန်ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းကျမ်းခေါင်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲစဉ်းစား တွေးတောမိသည်။
“ဤသူသည် ငါ့ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူသတည်း”
နောက်ဆုံးတွင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ၎င်းဒေသနာကို မဟောမနေရ၊ ဟောပြော စေခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာမက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ရှောလမုန်သီချင်းကို အသန့်ရှင်းဆုံးကျမ်းမြတ်တော်ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းလျှို့ဝှက်ချက်အား သိခွင့်၊ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိ ပိတ်လှောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သင်သည်အမြင့် ဆုံးသောဘုရား၌ နေရာကျသဖြင့် ယေရှုသည် သင့်ကိုချစ်၍၊ သင်သည်လည်းသခင်ကို ချစ်ရခြင်းဖြစ်၏ ထိုသို့ဆက်ဆံခြင်းကို ၎င်းစာအုပ်ငယ်၌ ဖွင့်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းရှောလမုန်သီချင်းသည် ကဗျာဆန်သော လက်တွေ့ချစ်ခြင်းကို ဖေါ်ပြပါ သည်။ ဤတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူတို့အား တေးကဗျာအားဖြင့် စကားပြောနေ ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤရှောလမုန်သီချင်းဆီသို့ သင်သွားလိုသောငှါ၊ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင် ရာ၊ရူးဖိနပ်ချွတ်ပယ်ထားရန်လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောမြေ၌ ရပ်တည်နေ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှောလမုန်သီချင်းသည် ကြေလွယ်သောပန်းပမာ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ကိုင်တွယ်တတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာကျမ်းစာတော်၌ အရေးကြီး၍ ခြားနားသော အချက်၄ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါမည်။” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 143).
ပထမဦးစွာ၊ ရှောလမုန်သီချင်းသည်၊ လင်မယားနှစ်ဦးတို့ကြားက မေတ္တာပုံရိပ်ကို ဖေါ်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ဣသရေလလူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ ချစ်မေတ္တာတော်ကို ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ရှေ့ဟောင်းဂျူးဥပဒေပညာရှင်တို့ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက် နှစ်ချက်ကို ပေးထားခဲ့ပါသည်။ ခရစ်ယာဉ်ယုံကြည်သူတို့အဖို့ ကျင့်သုံးမှုနှစ်ခုကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ တတိယအနေဖြင့် ခရစ်ယာဉ်ယုံကြည်သူနှင့် အသင်းတော် ဆက်နွယ်မှုပုံရိပ်ကိုလည်း ဖေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စတုတ္ထုအနေဖြင့် ခရစ်ယာဉ်တဦးချင်းစီအား ခရစ်တော်ဘုရား၏ ချစ်မေတ္တာကို အထူးဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး တဦးချင်းစီ၏ ဝိညာဉ်နှင့် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဆက်ဆံခြင်းကို ဖေါ်ပြခြင်းလည်းဖြစ် ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ထိုကဲ့သို့ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ ရှောလမုန်သီချင်းသည် ရောဘတ်မူရေးမက်ချေနီ၏ အကြိုက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်ပြီး၊ စကော့သီးစ် တရားဟောဆရာကြီးသည် သူ့၏အမှုတော်မြတ်၌ အထူးအသုံးပြုခဲ့သော ကျမ်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ မက်ချေနီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ သူသည်အသက်၂၉နှစ်၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည် “သူထာ၀ရ အမှတ်တံဆိပ်နဖူးထက်၌ တံဆိပ်ခတ်ထားပြီး တရား ဟောကြားခဲ့သူဖြစ်သည်ဆို၏” ရှောလမုန်သီချင်းသည် သူအသက်ရှင်စဉ်အကြိုက်အနှစ် သက်ဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဘတ်မတ်ချေနီသည် ရှောလမုန်သီချင်းကျမ်း ကို ဟောကြားသောအခါ၊ လူတို့သည် မျက်ရည်ကျ၊ ဒူးထောက်လျှက် ခရစ်တော်သခင် ရှေ့မှောက်၌ မိမိကိုကို ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့ကြပါသည်။ ဤကျမ်းသည် စကောသီးစ် တရားဟော ဆရာရှာမွေလရုသာဖေါ့တ်၏ အကြိုက်အနှစ်သက်ဆုံးကျမ်းတော်မြတ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ (၁၆၀၀-၁၆၆၁) ဒီ.အယ်လ်.မုဒီ(၁၈၃၇-၁၈၉၉)နှင့် ဟန်နရီအိုင်ယွန်ဆိုက် (၁၈၇၁-၁၉၅၁)သာမက၊ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သော စပါဂျန်သည်လည်း ၎င်းကျမ်းမြတ်တော်မှ ဒေသနာတော်၆၃ပုဒ်ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ရှောလမုန်ကျမ်းမြတ်တော်မှ ဒူကန်ကန် ဘေလ်က တရားဒေသနာတော် ဟောကြားသောအခါ၊ လူးဝစ်ကျွန်းငယ်၌ ဝိညာဉ်နိုးထမှု ရှိခဲ့ပါသည်။
အခုဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုရင်းကျမ်းကို ဟောပါတော့မည် သတိုးသမီးက သူ့ခင် ပွန်းကို ပြောကြားသည်မှာ “ဤသူသည် ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူ၏” ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ သန့်ရှင်းသောသူတော်စင်တို့က ယေရှုဘုရားအား “ဤသူသည် ငါချစ်ရာသခင် ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူ၏”ဟူ၍ ပြောခဲ့၏။ ဤဒေသနာတော် ကိုဟောကြားရင်း၊ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သောစကားကို အမှတ်ရမိ၏ စပါဂျန်က”၎င်းသည် မြင့်မားလွန်းသဖြင့် အကျွန်ုပ်မမှီနိုင်ပါဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ဤနက်နဲလှသော ကျမ်းမြတ်တော်က၊ ကျွန်ုပ်အားလွှမ်းမိုးထားပါသည်။ အနက်အဓိပွါယ်ကို ဖွင့်ဆိုဖို့ အခတ်တွေ့စေပါသည်။ သို့သော်၊ အချို့သော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဒီကနေ့ဖွင့်ပြပေးပါ မည်။ ယေရှုသခင်ကိုကို အကျဉ်းချုံးမျှသာ ကြည့်မျှော်ခြင်းထက်၊ သခင်ဘုရား ဤလောက၌ အသက်ရှင်ရှင်စဉ်၊ သခင့်၏ဘုန်းတန်ခိုးအားလုံးတို့ကို စဉ်းစားသောအခါ “သခင်သည် ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူသတည်း” ယေရှုခရစ်တော်၏ ဤလောကနှင့် ဆက်စပ်သောအသက်တာနှင့် ခရစ်ယာဉ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေခြင်းကို အချက်နှစ်ချက်အားဖြင့် ထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြပါမည်။
၁။ ပထမ၊ ဤလောကသည်၊ ယေရှုအား ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်သည်ဟု ဘယ်တော့မှ တွေးဖူးမည်မဟုတ်ပေ။
ဤလောက၌ သခင်ဝင်ရောက်ခြင်းအား အဘယ်သို့တားဆီးနေသည်ကို သင်မှတ် ထားပါလေ၊ သခင့်နာမတော်ကိုပင် ကြားလိုခြင်းငှါ မလိုလားကြပေ။ ယနေ့အမေရိ ကန်နိူင်ငံစစ်တပ်ထဲ ခရစ်ယာဉ်ဘုန်းတော်များအား ယေရှုနာမဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းကိုပင် ခွင့်မပြုကြတော့ပေဟူ၍ ကျွန်ုပ်ကြားနေရပါသည်။ တိုင်းသူပြည်သားတို့အား၊ သင်းအုပ် ဆရာတို့မှ ဆုတောင်းသောအခါ၊ ယေရှုနာမတော်ဖြင့် အဆုံးသတ်ဆုတောင်းရန် ခွင့်မပြု ကြတော့ပေ။ ယေရှုနာမတော်မြတ်ကို မလိုလားကြသည်မှာ အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ် တော့ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ခေတ်ယုံကြည်သူတို့ သည် မည်သည့်အချိန်အခါ၌မဆို ဆုတောင်းခြင်း၌ အားကြီးကြသူများဖြစ်ပြီး၊ စတူဒီယို ခန်း၌ “ယေရှုနာမတော်ဖြင့် အာမင်”ဟုဆိုခြင်းကို မိုကူလ်တို့က တားဆီးခဲ့ကြပါသည်။ “ယေရှု၏နာမတော်မြတ်၌” ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းမြွတ်ဆိုသည့်အခါတိုင်း ထိုသို့ သော သူတို့သည် ယေရှုကို အလွန်မုန်းတီးကြပါသည်။
ကယ်တင်ရှင်ကို မုန်းတီးခြင်းကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ရှုတ်ချခြင်း ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်”နောက်ဆုံးသော ခရစ်တော်၏ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း”၌ ကယ်တင်ရှင် သခင်ကို ကာမအရူးကဲ့သို့ သီးသန့်ပြသခဲ့ကြပါသည်။ ဧည့်ခန်းမ၌ ကျွန်ုပ်ထိုင်၍ စာဖတ် နေစဉ်၊ ထိုရုပ်ရှင်စိတ်ထဲ၌ ပေါ်လာပါသည်၊ ထိုအခါ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်အားစကား ပြောနေသည့်နှယ်ကြားယောင်နေမိပါသည်။ ထိုအခါ “ရောဘတ်ထိုသူတို့ကို မင်းဒီ အတိုင်းထားရစ်မှာလား?” ကျွန်ုပ်က၊ “အိုအဖ အကျွန်ုပ်ဘာဆိုဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဟူ၍ ပြောခဲ့သည်” ထိုအခါ သခင်က “အကယ်၍ သင်မဆောင်ရွက်ပါက မည်သူပြု မည်နည်း”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သွား၍ယေရှုကို ကာကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူတို့က ကျွန်ုပ်တို့အား ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပြောကြားသည်ကို ညစဉ်သတင်း၌ ကြားရပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ထိုသူတို့သည် နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာနှင့်ဝါးစထရိတ် ဂျာနယ်ဖုံး၌ ဖေါ်ပြထားကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် နိုက်လှိုင်း၊ ထူနိုင်ရှိုး၊ ခရော့စ်ဖိုက်ယာတို့၌ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ပုံပြင်ပမာ တီဗီအစီစဉ်၌ လည်း ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ရေးသားဖေါ်ပြ ထားကြပါသည်! ထိုအကြောင်းအရာကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ ဂရိနိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိူင်ငံနှင့် အစ္စရေးနိူင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာသို့ သတင်းပို့ဖေါ်ပြထားကြပါ သည်။ မကြာမီကျွန်ုပ်သည် “ဝိုင်းရံထားသော ဟောလိဝုဒ်”ဟူသော စာအုပ်ရရှိခဲ့ပါသည်၊ ၎င်းကို သောမစ်.အာရ် လင်းဒ်လော့စ်(၂၀၀၈၊ တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ကန်တက်ကီ) ကရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်၏အရှေ့ဖုံး၌ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော် သင်းထောက် ကေကန်နှင့်လူပေါင်း ၁၂၅ယောက် “ညစ်ညမ်းသော ရုပ်ရှင်”ဟူ၍ စာရွက်ကိုင်ဆောင် ထားသောပုံကို ဖေါ်ပါသည်။ ပေ၃၀လောက်ရှည်လျှားသော စာတမ်း၌ “အသင်ဝါဆာမန် ယေရှုအား အန္တရယ်ပြုခြင်းမှရပ်တန့်ပါ”ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဝါဆာမန်သည် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ထဲက ခြားနားချက်တဆယ့် သုံးချက်ကို ကိုးကားဖေါ်ပြထားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ယေရှုကို သာမုန်းတီးကြခြင်း မဟုတ်၊ ဒေါက်တာကေကန်ကိုလည်း မုန်းတီးခဲ့ကြသည်။ ယေရှုကို ကာကွယ်သော ကြောင့်၊ ကျွန်ုfပ်နှင့်အသင်းသူ^သားအားလုံးကိုလည်း ထိုသူတို့သည် မုန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် “ဝိုင်းရံထားသော ဟောလိဝုဒ်” ဟူ၍ စာအုပ် ကိုရေးသားခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ စဉ်းစားကြည့်သော်၊ အနည်းငယ်သော ၁၂၅ယောက်သော နှစ်ခြင်း အသင်းဝင်တို့သည် ဟောလိဝုဒ်၏ “ဝန်းရံခြင်း”ခံခဲ့ကြရသည်! မိုကုလ်ရုပ်ရှင်ကား သည် မြို့တော်တို့နှင့်ဟောလိဝုဒ်၊ ဘေဗါလီတောင်ကုန်းပေါ်၌ ရှိသောသူတို့၊ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို မုန်းတီးကြမှန်း အခုမှဘဲသိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘီလ်မဟာမှသည် ဂျောခ်ျကလူနီတိုင်အောင်၊ အင်ဒါဆန်ကူပါမှ ဝှမ်ဘလီဇာတိုင်အောင် ရှိသမျှ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ဆန့်ကျင်ငြင်းပယ်ကြပါသည်။ သမ္မတအိုဘားမားတောင်မှ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်က ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အစီစဉ်၌ ယေရှုကို အလေးထားမပြောကြား ခဲ့၊ ရုပ်တုမျှသာ အရိပ်အမြွေတ်ပြောဆိုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့သခင်အား မုန်းတီး ခြင်းသည် အသင်းတော်တို့အား တရားဝင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုသည်ထိ ရှိနေမည်ဖြစ်၍ သင်သက်ရှိထင်ရှားစဉ်ပင် တွေ့ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တောင်မှ ၎င်းအဖြစ်အ ပျက်ကို တွေ့မြင်အုံးမည်ဖြစ်သည်။
ယေရှုအား နောက်ဘက်မီးရှို့ချင်သောသူတို့ ယနေ့အသင်းတော်၌ ရှိနေကြပါသည် သူ့အား လက္ခံကြိုဆိုချင်သူတောင် မရှိတော့ပြီဖြစ်သည်! ဒေါက်တာမိုက် ကယ်ဟောတန် ၏ အံ့ဩဖွယ် “ခရစ်တော်မပါသော ခရစ်ယာဉ်ယုံကြည်သူဟူသော စာအုပ်၏အဖုံးတွင်၊ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်မပါသော ခရစ်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မရောက်ရှိကြပါ” ဆိုခြင်းအား ဟောဆန်က စောဒကတက်မိပါသည်၊ သို့တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဘေးဖယ်ထားကြပါသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ မိန့်ကြားထားသည်ကို မအံ့ဩသင့်ပေ။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွှန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ ပေါက်သော အတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွါး၏ ပမာဏာပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ၊ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာ၊ လက္ခဏာနှင့် မပြည့် စုံ၊ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏ ငြိုငြင်ခံရ သူ၊ နာကျဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏ သူတပါးမျက်နှာလွဲ ခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍ ငါတို့ သည် မရိုသေကြ (ဟေရှာ ၅၃း၂-၃)။
ထိုသို့ဇာတိလူသား၊ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသော သူတို့သည် ယေရှုကို ထိုသို့ မြင်ကြသည်။ “ပမာဏပြုစရာမရှိ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ ချစ်လိုဖွယ်သော မျက်နှာ လက္ခဏာနှင့် မပြည့်စုံ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍ လူတို့၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏”ဟု ကျမ်းလာပါ သည်။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ဘ၀၌ ကက်သလစ်ဘုရား ကျောင်းသို့ သွားမြဲသွားခဲ့၏။ ၁၉၄၀ခုနှစ်တုန်းက ထိုဘုရားကျောင်း သည် နေ့တိုင်းဖွင် လှစ်ထားပါသည်။ ထိုနေရာသို့ အမြဲသွားရောက်ခြင်းကား တိတ်ဆိတ်၍ သပ်ရပ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားကျောင်းထဲ၌ ယေရှုကား တိုင်ထမ်းပြီး၊ မျက်နှာတော်မှ အသွေးတော်စီးကျသည့် ပုံကိုချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တဦးကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ရက်စက်စွာ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းက ကျွန်ုပ်အား ကြောက်လန့်ဖွယ်ဟု တွေးထင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွေးကို ၁၉၆၁၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက် အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်၊ နောက်ဆုံး ကျွန်ုပ်အသက်တာ ပြောင်းသည့်တိုင် တွေးခဲ့သေးပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ် ရက်စက်စွာ အသေခံခြင်းသည် ရင်နင့်ဖွယ်လည်းဖြစ်သည်၊ ဘာကိုမှမျှော်လင့်စရာမရှိပါလားဟု တွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ် ကျွန်ုပ်သည် အသစ်သော အသက်တာပြောင်းလဲပြီး သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်လာပြီး ခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ ထိုင်တော်မူသော အရှင်ကို ပထမအကြိမ် တွေ့ခဲ့ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့မနက်မြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းသည် ယ္ခုဆိုလျှင် ၅၁နှစ်ကြာသွား ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ သခင်သည် ကျွန်ုပ်ဘ၀၏ ပထမဦးစွာသော ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်!
၂။ ဒုတိယ၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာဉ်တို့က သခင်အား ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေ ဟု မြင်ကြသည်။
သခင်သည် ငါချစ်ရာ ငါ့အဆွေဖြစ်မူ၏
(၁၉၂၄၊ လီလာလောင်း သီကုံးရေးသားသော
ကျွန်ုပ်ခံစားသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေလည်း ရုတ်တရက်ခံစားကောင်းခံ စားပေမည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း ယေရှုသည် ချစ်ဖွယ်ဖြစ်သည်ကို မြင်တော့ပါမည်။ ထိုအခါ ယေရှုသည် သင်၏အသက်သခင်ဖြစ်တော်မူမည်။ ထိုခဏတွင် ချားလ်ဝီစလီနှင့်အတူ အောက်ပါဓမ္မသီချင်း သီဆိုနိုင်ပါမည်။
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ ချစ်းလ်၊ ဝီစလီသီကုံးသော).
ကယ်တင်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မနက်တိုင်း ဓမ္မသီချင်းသီဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
အပြစ်ခွံ၌ နစ်မွန်းအစဉ်၊ ရုန်းထွက်မရ
ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား အသေခံ ကျွန်ုပ်၏သခင်
ထိုစဉ်၊ ကျွုန်ုပ်က “ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေ”ဟု မက်ချေနီနှင့် စပါဂျန်တို့၌အတူ ကြွေးကြော်ခဲ့၏ ထိုစဉ်ဂျာမန် ဓမ္မသီချင်းကို အသံကုန်အော်ပြီး သီဆိုချီးမွမ်းခဲ့သည်။
(၁၈၂၃-၁၉၀၄၊ ၁၇ရာစုနှစ်၊ ဂျာမန်ဓမ္မသီချင်းမှ ယောဆက့်အေ.ဆီးစ်က
“ဤသူသည်၊ ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်၏”
“ထိုသားတော်သည် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍန်တော်ဖြစ် ၏ဝေနေယျ သတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင်လည်း သားဦးဖြစ်တော်မူ၏ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်သည် ကောင်းကင်ပေါ် မြေကြီးပေါမှာ ရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပ်အရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ အစိုးရခြင်းတန်ခိုး ဖြစ်စေ၊ အထွဠ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်း၊ ထိုသခင်အဖို့အလို့ငှါ၎င်း ခပ်သိမ်းသောအခါတို့သည် ဖန်ဆင်းလျှက်ဖြစ်ကြ၏ သားတော်သည် လည်း ခပ်သိမ်းသောအရာ မဖြစ်မှီဖြစ်တော်မူ၍၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ သည် တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သာ တည်ကြ၏။ သူသည် အသင်းတော် တည်းဟူသော ကိုယ်၏ဦးခေါင်းဖြစ်တော်မူ၏ အရာရာ၌ ထူးမြတ်ခြင်းငှါ မူလအရင်းဖြစ်၍ သေသောသူတို့တွင် သားဦးဖြစ်တော်မူ၏ အကြောင်းမူ ကား၊ ခပ်သိမ်းသော ပြည့်စုံခြင်းကို သားတော်၌ကိန်းဝပ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေ၊ မြေကြီးအရာဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ထိုသားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်စေခြင်းငှါ အလိုရှိတော်မူ ၏။ အထက်က ဘုရားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍ ဆိုးညစ်သောအကျင့်ကို ကျင့် သဖြင့် စိတ်နှလုံး၌ ရန်သူဖြစ်သော၊ သင်တို့ကို ကိုယ်ခန္တာတော်၌ အသေ ခံတော်မူသောအားဖြင့် ယ္ခုသင့်မြတ်စေတော်မူ၏ အကြောင်းမူကား ကောင်းကင်အောက်၌ ရှိသမျှသော ဝေနေယျသတ္တဝါတို့အား ဟောပြော ဖြင့် သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးသော ဧဝံဂေလိတရား၏ မျှော်လင့် ခြင်းမှမရွေ့လျှော့ပဲ၊ တိုက်မြစ်ကျခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကွ၊ မြဲမြံစွာ ယုံကြည်ကြလျှင်၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လျှက် အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ် လျှက်ရှိသော သင်တို့ကို ရှေ့တော်၌ ဆက်သမည့်အကြောင်းတည်း” (ကောလော ၁း၁၅-၂၂)။
ဟာလေလုယာ! ထိုအရှင်သည် ယေရှုပင်ဖြစ်သည်! ဟုတ်ပေသည် သူသည်ငါ၏ ချစ်ရာ သခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်သည်။” ကျွန်ုပ်တို့ သခင်အားငြင်းပယ်ခြင်းမှ ပြောင်းလဲကာ၊ ခြေတော်ရင်း၌ ဦးချလျှက်၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြပါစို့လား၊ အကြောင်းမှာ၊ သခင်သည် သင့်အပြစ်ငရဲမှ ကယ်တင်ပြီး သင့်အား ထာ၀ရအသက်ကိုပေးပြီးဖြစ်ပါ သည်။ ဟာလေလုယာ! “သူသည် ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်သည်” “ဟုတ်ပေ၏ သူသည်ငါ၏ သခင်ငါ့အဆွေဖြစ်သည်”။
သခင်သည် ငါ၏ချစ်ရာ၊ ငါ့သခင်ဖြစ်တော်မူ၏
“သခင်၏ ခြေတော်ကိုနမ်းခဲ့သော” အမျိုးသမီးကဲ့သို့ ရှေ့တော်၌ တိုးဝင်ချဉ်းကပ် ပါ။ (လုကာ၇း၃၈)။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “သင်သည် အပြစ်တို့နှင့် လွှတ်လေပြီ” (လုကာ၇း၄၈)ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သားတော်အား နမ်းကြလော့။ သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား “သားတော်ကို နမ်းကြလော့.. သားတော်ကို ကိုးစားသော သူအားလုံးတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏” (ဆာလံ၂း၁၂)။ ဒီကနေ့ မိတ်ဆွေ ယေရှုကိုနမ်းလျှက်၊ ယုံကြည်ကိုးစားပါမည်လား? သခင့်ကို နမ်းမှာလား? သင်က ဟုတ်ကဲဟု ပြောပေးမည်! ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သခင်အားနမ်းလိုက်ပါ၊ ယုံကြည်ကိုးစား လိုက်ပါ၊ သူသည် ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူ၏! စပါဂျန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
-”သူသည် ချစ်စရာနှင့်အဆွေ”ကောင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ သခင်ထံချဉ်း ကပ်ဖို့ မစိုးရွံ့ပါနှင့်၊ သူသည်ကြောက်ရွံ့စရာဟူ၍ ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။ သင်နားလည်လွဲမှားမှုကြောင့်သာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်၊ အပြစ်သား ပင်ဖြစ်သည်ဟု သင်ယူဆသော်လည် “သူသည်ချစ်စရာ၊ အဆွေကောင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်” ထို့ကြောင့် သခင်သည် အပြစ်သားသင့်ကို အမြဲတမ်း ကြိုဆိုနေသူဖြစ်ပါသည်။ နာမတော်မြတ်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါလေ။ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုပင်ဖြစ်သည်။ ချစ်စရာနာမ၊ မဟုတ်ပါလား? ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို စဉ်းစားကြပါ။ ပျောက်ဆုံးသောသူတို့kကို ရှာဖွေပြီး ကယ်တင်ဖို့ရာ ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် သခင်၏ လုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်စရာမဟုတ်ပါလား?ပြီးမြောက် ပြီးသော အမှုတော်အတွက် စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ သခင်အသွေးတော်မြတ် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးနုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ချစ်စရာကောင်းသည် မဟုတ်ပါလား! သခင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဘုရားသ ခင်၏ ကောင်းကင်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် သင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ချစ်စရာကောင်းသည်မဟုတ်ပါလား? (မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သခင်ကိုကြည့်မျှော်လိုက်ပါအုံး) ယေရှုအား၊လု နေသောသူတို့အဖို့ ချစ်စရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သခင့်ထံချဉ်းကပ်ပါ၊ ဥခင် အားကြိုဆိုလိုက်ပါလား၊ သင့်ကိုစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင့်အားဖိတ်ခေါ် လျှက်ပါ။ ဥပုသ်နေ့တိုင်း ထိုတရားကို ဟောကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ်မြောက်တင်ခြင်းခံရ၏ င့်အားဖိတ်ခေါ်နေပါသည်၊ သင်သည် သခင်အားမစွန့်လွှတ်ပါ သခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ပါ၊ ထာ၀ရအသက်ရှင်လိုက်စမ်းပါ၊ အာမင် (C. H. Spurgeon, “Altogether Lovely,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume 17, pages 407-408).
ဟုတ်ပေသည်၊ “သခင်သည် ငါ၏ချစ်ရာ၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူသည်” သခင်သည် သူ့အားယုံကြည်ကိုးစားလျှက်၊ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငှါ ခေါ်တော်မူ၏ အကြောင်း မူကား၊ ယေရှုသင့်ကို ချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်! ယေရှုသင့်ကို ချစ်သောကြောင့်ဖြစ် သည်! ယေရှုသင့်ကို ချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်! သခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ ယေရှုသင့်ကို ချစ်သည်! သင့်ကိုမစွန့်ပယ်ပါ၊ သင့်အားချစ်တော်မူသည်!
ဤဓမ္မသီချင်းသီဆိုနေစဉ်၊ သင်တို့အားအနောက်ဘက်ရှိ ဆွေးနွေးအခန်းထဲသို့ သွားစေလိုပါသ်ည။ အကယ်၍ သင်သည်ခရစ်ယာဉ်တဦးမဖြစ်သေးပါက သင်ဖတ်ဖို့ရန် ကျမ်းပိုဒ်ကို ပေးပါမည်။ သင်သည် ပျောက်ဆုံးလူသားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါက၊ အခြားသော သီချင်းပိုဒ်ဆိုစဉ် ထိုအခန်းထဲသို့သွားပေးပါ၊ ဒေါက်တာကေကန်က သင့်အားခေါ်ဆောင် သွားပါလိမ့်မည်။ သခင့်ထံ ယ္ခုပင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက်ပါ၊ ဒီကနေ့ပင် သူသည် သင်၏ ချစ်ရာသခင်၊ သင့်အဆွေဖြစ်တော်မူ၏။ အခြားသော ဓမ္မသီချင်းအပိုဒ်ကို သီဆိုကြပါစို့။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်ချန်မှ ရှောလမုန်သီချင်း၅း၁၀-၁၆ အထိဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၂၃-၁၉၀၉၊ ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့် ယောဆက်.အေ.ဆီးစ်မှ ဘာသာပြန်ဆိုသော “ဖြောင့်မတ်သော ယေရှု”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပါသည်။
ဒေါက်တာအာရ်အယ် ဟိုင်မာဂျေအာရ် ဟောကြားသည်။
“ဤသူသည် ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်တော်မူသတည်း”
၁။ ပထမ၊ ဤလောကသည်၊ ယေရှုအား ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဖြစ်သည်ဟု ဘယ်တော့မှ တွေးဖူးမည်မဟုတ်ပေ။ ဟေရှာယ ၅၃း၂-၃
၂။ ဒုတိယ၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာဉ်တို့က သခင်အား ငါ၏ချစ်ရာသခင်၊ ငါ့အဆွေဟု မြင်ကြသည်။ ကောလောသဲ ၁း၁၅-၂၂၊ လုကာ ၇း၃၈၊ ၄၈၊ ဆာလံ၂း၁၂။